Twitter haizoverenge mifananidzo uye zvinongedzo yakanangana nemuganhu wayo 140 | IPhone nhau
Twitter inoronga kumira kuverenga zvinongedzo uye mafoto evane 140 mavara
Pasina nguva refu yapfuura, ndakaona tweet kubva ku iPhone News umo musoro wenyaya wakatemwa. Kana iwe ukatitevera paTwitter, iwe uchave waona kuti isu tinoburitsa iwo musoro wenyaya wechinyorwa, chinongedzo kune iyo positi uye nemufananidzo wayo wakaratidzwa. Panguva ino, zvese zviri zviviri pikicha uye chinongedzo chinobvisa mavara kubva pamakumi mana nemakumi mairi Twitter yakasimbisa, asi icho chinhu chingangoita kuti mazuva ayo averengeke.
Maererano ne Bloomberg, uyo anodudza masosi anoziva nezvenyaya iyi, Twitter inomira kuverenga mafoto uye zvinongedzo sechikamu chemakumi mana emameseji emameseji. Iye munhu akapa ruzivo anoda kuramba asingazivikanwe uye anovimbisa kuti shanduko inogona kuitwa mukati memavhiki maviri. Parizvino, zvinongedzo zvine mavara makumi maviri nematatu pakureba, nepo mapikicha ari makumi maviri nemana, saka kana ese ari maviri akatumirwa, muganho unodonha kubva pamakumi mana nematanhatu kusvika pa23.
Twitter inobvumidza rumwe ruzivo kuwedzerwa mumavhiki maviri
Zviripachena kuti Twitter yakakosha pasocial network uye, kunyangwe hazvo runako rwayo rwuri kukonzerwa nemuganhu wevanhu zana nemakumi mana, ichokwadi kuti dzimwe nguva tinoda chimwe chinhu kuti tikwanise kuzviratidza. Ndicho chikonzero nei vashandisi vachifanira kutumira skrini kune manyorerwo ekushandisa pamwe nezvakanyorwa zvinyorwa kana kushandisa zvinoshandiswa senge TwitLonger, sevhisi inotibvumidza kuti tinyore zvakati wandei zvinyorwa zvinowanikwa kuburikidza neiyi link inowanikwa mune iyo tweet.
Ini pachangu, ndiri pachena nezve rinotevera danho zvingave zvinosanganisira sevhisi inoshanda seTwitLonger. Pfungwa ndeyekuti iwo mameseji anoramba ari mavara zana nemakumi mana pakureba (kuti mafoto uye zvinongedzo hazviverengi zvakanaka), asi kuti isu tinogona kumutsa sarudzo sanganisira mamwe mavara kana tichida. Chinhu chakanakisa chaisazove chekusarudzika sarudzo inoshanda, nekuti izvi zvinogona kuita kuti Timeline yedu izadzwe nezvisungo zvisina basa muzviitiko zvekuti meseji inogona kugadziridzwa uye kutevedzera 140 remuganho wehunhu, kana ikasaimisikidza mune tweet yaida iyo. (sekureba sekutaura kwandakaita, hazvingagadziriswe kuti zvikwane mavara zana nemakumi mana).
Chero zvazvingaitika, zvinoita senge chiri padyo nesu ndechekuti mafoto uye zvinongedzo zvinomira kuverenga kune zana nemakumi mana emuganhu, chimwe chinhu chichaitika mumasvondo maviri. Mubvunzo unosara ndewokuti: vachaburitsa iyi API kuitira kuti tigone kuishandisa mune yechitatu-bato kunyorera kana ichave ichiwanikwa chete kubva kune zviri pamutemo shanduro?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Twitter inoronga kumira kuverenga zvinongedzo uye mafoto evane 140 mavara
Podcast 7x09: Enda kumba, Instagram, wakadhakwa